द यल्लो वालपेपर - विकिपिडिया
"द यल्लो वालपेपर"
सन् १९०१, आवरण पृष्ठ
चार्लेट पर्किन्स गिल्म्यान
लघु कथा, वाचन, नारीवाद (नारी स्वास्थ्य र मानसिक रोग)
द यल्लो वालपेपर (अङ्ग्रेजी: "The Yellow Wallpaper", वास्तविक शीर्षक: "The Yellow Wall-paper. A Story") सन् १८९२ को द न्यु ङङ्गल्यान्ड म्याग्जिनमा प्रकाशित ६००० शब्दको छोटो कथा हो । यस कथाका लेखक अमेरिकाली लेखक च्योरलेट पर्किन्स गिल्म्यान हुन् । यस कथालाई अमेरिकाली नारीवादी धारका सुरुवाती दिनहरुको महत्त्वपूर्ण रचनाका रुपमा लिइन्छ । कथा उन्नाइसौं शताब्दीको महिला स्वास्थ्यमा हेरिने दृष्टिकोण, शारीरिक र मानसिक दुवै रुपमा, बताउन सफल भएको मानिन्छ ।
कथा नाम नबताइएकको, महिलाको (डायरी बाट) नजरबाट प्रस्तुत गरिएको छ । उनका श्रीमान् जोन (चिकित्सक) ले एक पुरानो घर भाँडामा लिएका छन् । महिलालाई काम गर्न निषेश गरिएको छ, मात्र खाना र व्यायाम गर्न मात्र सुझाव दिइएको छ जसले गर्दा महिला "अस्थायी मानसिक चिन्ता" बाट मुक्त हुन सक्ने जोन बताउँछन् । उक्त समय महिलाहरूलाई उपचारार्थ त्यस्तै विधि अपनाइन्थ्यो । कोठाका झ्यालहरूमा बालबालिकाहरू नचढुन् भन्ने हेतुले बारिएका छन् । महिला आफ्नो लेखन सबैबाट लुकाउँछन् ।
कथा मुख्य पात्र, महिलाको बिग्रदों मानसिक स्वास्थ्यको बारे बताउँदैँ जान्छ । मन बहलाउने कुनै पनि विषय नहुनाले महिला भित्ताको पहेँलो वालपेपर (भित्ते पत्र) मा अनेकौं कुरा कल्पन्छन् । अन्तमा, महिला भित्तामा अर्को कुनै महिला घिस्रिरहेको कल्पना गर्दछिन् । महिला कोठामा आफैँलाई एक्लै बस्छिन् र आफू सुरक्षित भएको महशुस गर्छिन् ।
↑ Stetson, Charlotte Perkins (जनवरी १८९२), "The Yellow Wall-paper. A Story", The New England Magazine 11 (5,)।
The Yellow Wallpaper Pdf र अन्य शैलीमा
Works related to The Yellow Wall Paper at Wikisource
The Yellow Wall Paperसँग सम्बन्धित चित्र तथा श्रव्यदृश्यहरू विकिमिडिया कमन्समा रहेको छ।
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=द_यल्लो_वालपेपर&oldid=589392" बाट निकालिएको
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक ०६:४३, १२ डिसेम्बर २०१६ मा परिवर्तन गरिएको थियो।